कहिले सार्वजनिक हुन्छ सरकार ‘समलिंगी विवाह’ प्रतिवेदन ?
काठमाडौं (पहिचान) बैशाख १७ – समलिंगी विवाहबारेको अध्ययन गर्न गठित समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा तेस्रो लिंगीको विवाह र वैवाहिक सम्बन्धबारे स्पष्ट व्याख्या गरेको छ। समितिका अध्यक्ष र सदस्यले ‘समलिंगी विवाह’ नाम दिइएको उक्त प्रतिवेदनमा तेस्रो लिंगी र अन्तरलिंगी व्यक्तिको विवाहबारे समेत स्पष्ट लेखिएको दाबी गर्दै आएका छन्।
समितिको अध्यक्ष डा. स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिव पदबाट अवकाश पाएर झण्डै सात वर्षदेखि बन्द रहेको औषधि व्यवस्था विभागको अध्यक्ष छन्। अधिवक्ता हरि फुयाँल पहिलो पटक केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएकै बेला महान्यायाधिवक्ता भएकै हुन्। फुयाँल महान्यायाधिवक्ता हुनुअघि नै समलिंगी विवाहबारेको प्रतिवेदन सरकारले बुझिसकेको हो। के अहिले आएर तेस्रो लिंगीलाई समलिंगी विवाहमा तेस्रो लिंगी शब्द राख्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लागेर यो प्रतिवेदनअनुसार कानुन नबनेको हो र? तेस्रो लिंगीले पनि यो प्रतिवेदनअनुसार कानुन बन्नुपर्छ भनिरहेका बेला सरकारले किन प्रतिवेदन सार्वजनिकसमेत नगरी मौन बसिरहनुपथ्र्यो? के यो प्रतिवेदन डा. लक्ष्मीराज पाठक र पूर्वमहान्यायाधिवक्ता हरि फुयाँलको मात्रै हो? के उनीहरूले मात्रै यो प्रतिवेदनबारे जवाफ दिँदै हिँड्नुपर्ने हो? कहिलेसम्म दुवै जनाले अहिले हामी कार्यान्वयन तहमा छैनौँ भनिरहने? के छ प्रतिवेदनमा भन्ने धेरैलाई गुमराहमा पारिएको छ। यो प्रतिवेदन सरकारले आजसम्म आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक समेत गरेको छैन।
तर पछिल्लो समय यो प्रतिवेदनलाई नजर अन्दाज गरेर वैवाहिक समानताबारे छलफल भइरहेको छ। यही र अहिले नै अधिकारवादी ‘राइट हियर राइट नाउ’ संस्थाले समलिंगी विवाह भनेको समलिंगी पुरुष–पुरुषबीच र समलिंगी महिला–महिलाबीच मात्रै भएकाले वैवाहिक समानताबारे बहस सुरु गरेको बताएको छ। उसलाई तेस्रो लिंगी महिला र पुरुष तथा अन्तरलिंगीको विवाहबारे समलिंगी विवाहको प्रतिवेदनमा प्रष्ट रूपमा लेखिएको छ भन्ने जानकारी नभएको पाइएको छ। नेपालमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक व्यक्तिको अधिकारका विज्ञको शब्द सापटी लिएर भन्नुपर्दा– समलिंगी विवाह भनेको समलिंगी जोडीले, नागरिक वा धार्मिक प्रथाद्वारा विवाह बन्धनमा बाँधिनु हो। वैवाहिक समानता भनेको कानुनले समलिंगी विवाह र विपरीत लिंगी विवाह (महिला–पुरुष)लाई समान हैसियत र अधिकार प्रदान गर्नु हो।
साभार : थाहा खवर